Yakachipa OEM simbi isina simbi inotendeuka zvikamu zvakagadziriswa fekitori nevatengesi Ouzhan
OEM simbi isina simbi yekushandura zvikamu maitiro
Lathe kugadzira inonyanya kushandisa yekushandura chishandiso kutenderedza chinotenderera workpiece. Drills, reamers, reamers, matepi, kufa uye knurling maturusi anogona zvakare kushandiswa pane iyo lathe yekuenderana inoenderana. Lathes dzinowanzotsigi- kushandiswa machine miseve, discs, maoko nezvimwe workpieces pamwe kutenderera hukawanika. Ndiwo akanyanya kushandiswa mhando yemuchina chishandiso kugadzirisa mune michina kugadzira uye kugadzirisa mafekitori. Ouzhan inopa yakagadziriswa masevhisi ekugadzirisa kwesimbi isina simbi yakashandura zvikamu zvevanokosha vatengi.
OEM simbi isina simbi yekutendeuka zvikamu zvekugadzirisa michina zvikamu
Izvo zvikamu zvikuru zvesimbi isina simbi ndeye kabhoni, chromium, nickel, uye zvimwe zvinoriumba zvinhu zvakaita se molybdenum, mhangura, uye nitrogen zvinowedzerwa. Chinhu chikuru chinobatanidza zvinhu musimbi isina chinhu ndiCr (chromium), uye chete kana zvirimo zveCr zvasvika pane imwe kukosha, iyo simbi inorwisa kuramba. Stainless simbi ine yakanakisa hunhu senge yakasarudzika simba, yakakwira kupfeka kuramba, yepamusoro ngura kuramba uye kuramba ngura. Naizvozvo, inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, michina yezvikafu, indasitiri yemagetsi, indasitiri yemidziyo uye kushongedzwa kwemba, kupedzisa indasitiri. Lathe kugadzira chikamu chemuchina wekugadzirisa.
Ouzhan dzakagadziriswa zvikamu zvinoratidza
Zvakanakira Shanghai Ouzhan Stainless simbi kutendeuka zvikamu
- Zviri nyore kuve nechokwadi chekumira kwenzvimbo yega yega yekugadzirisa pamusoro peiyo workpiece
- Yakakura kupfeka kuramba
- Yakakwirira inorwisa-ngura kuita uye
- Inokodzera kupedzisa yeasina-ferrous simbi zvikamu
- Yakasimba uye yakaoma
Ouzhan China CNC Machining Service-- Yakasarudzika mechina simbi isina simbi yekushandura zvikamu zvekugadzirisa zvigadzirwa
Mashoko Martensitic simbi, ferritic simbi, austenitic simbi, austenitic-ferritic (duplex) Stainless simbi uye kunaya kuomesa Stainless simbi, nezvimwewo, SUS201, SUS304, SUS303, SUS420, SUS430
Surface kurapwa Iyo yekumusoro kurapwa kwesimbi isina simbi inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvaunoda, waya kudhirowa, kupukuta, pamusoro pasivivhi, pickling, yekuchenesa mumiririri degreasing uye degreasing,
Maitiro makuru Pre-kurapwa → kupfuura
Kudzora kwemhando Yakaomarara mhando kudzora mune yese maitiro ehurongwa hwekuyera muchina kubva pane zvinhu kusvika pakuisa
Kushandisa Kugadzirisa nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinotenderera, senge yemukati neyekunze cylindrical pamusoro, yemukati neyekunze conical pamusoro, shinda, groove, kumagumo pamusoro uye kugadzira pamusoro, nezvimwe.
Custom vanodhirowa Inogamuchira otomatiki CAD, JPEG, PDF, STP, IGS uye mamwe akawanda mafomati emafaira
Pashure: Nokuchengetedza zvikamu nendarira
Zvadaro: Kukanda ndarira
Customized Stainless simbi akatendeuka zvikamu proces ...
Customized electroplated nendarira akatendeuka zvikamu Pr ...